Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Abantu abaninzi benzakele kuqhushumbo lwebhasi yaseRussia
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • iindaba • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuqhuma okunamandla kwenzeka xa abakhweli babekhwela ibhasi kwindawo yokumisa ibhasi kwindawo enkulu yokuthenga.
Malunga nabantu abangama-30 babesebhasini ngexesha lokuqhushumba.
Olu dubulo lwenzeka xa abakhweli babekhwela ibhasi.
Ukuqhuma kwenzeka kwindawo yokumisa ibhasi kwindawo yokuthenga edolophini.
Ukuqhuma kwenzeke edolophini eVoronezh ngorhatya lwangoLwesine
Ibhasi yabakhweli iqhume kwisixeko saseVoronezh kumbindi weRussia.
Imifanekiso evela kwindawo yokuqhuma ibonisa ibhasi eqhekekileyo ngumoya.
Imifanekiso ejikeleze kwi-intanethi ibonisa ukuba ibhasi yayonakaliswe kakhulu kukuqhushumba, kunye neepaneli zomzimba kunye nophahla olukrazukileyo.
Ngokwengxelo zeendaba zasekuhlaleni, abantu abaninzi benzakala kolo dubulo.
Ukuqhuma kwenzeke edolophini eVoronezh ngorhatya lwangoLwesine.
Malunga nabantu abangama-30 babekhwele ebhasini ngelixesha kuqhuma, umqhubi, owasindayo kuqhushumbo, uxelele amajelo endaba.
Ubuncinci abantu abali-12 benzakele kolu dubulo, kubandakanya owasetyhini omnye owanqunyulwa imilenze, uxele amajelo endaba, becaphula imithombo.
Usekela-rhuluneli wommandla waseVoronezh uxelele amajelo eendaba ukuba ubunqolobi abukho phakathi kweenguqulelo eziqwalaselwe ngabasemagunyeni kweli nqanaba lophando.